FADEEXAD: Sir Alex Ferguson Oo Loo Heysto Inuu Go’aamiyay Natiijada Kulan Champions League Ah Si Uu U Helo Saacada Rolex Oo Dahab Ah - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
October 18, 2019 at 18:05 FADEEXAD: Sir Alex Ferguson Oo Loo Heysto Inuu Go’aamiyay Natiijada Kulan Champions League Ah Si Uu U Helo Saacada Rolex Oo Dahab Ah2019-10-18T18:05:57+01:00 CAYAARAHA
Warbaahinta Ingariiska ayaa daabacday maanta hadal uu maxkmad ka sheegay wakiilka kubada cagta Talyaaniga Giuseppe Pagliara kaasoo loo heysto inuu qorsheeyay natiijooyinka ciyaaro si qamaar loogu guuleysto.
Pagliara ayaa la xiray sannadkii 2005 isagoo loo heystay inuu go’aamiyay natiijada kulan Serie B ah oo u dhaxeeyay kooxaha Genoa iyo Venecia isagoo la heshiiyay madaxweynayaasha labada kooxood iyo ciyaartoyda.
Natiijada baaritaankaas ayaa keentay in Genoa laga tuuro heerka seddexaad, waxa uu wakiilka sidoo kale qeyb ka ahaa fadeexadii keentay in Sam Allardyce uu iska casilo shaqadii tababaraha xulka England sannadkii 2016.
Dhageysiga dacwada wakiilka oo ka dhacday shalay dalka Ingariiska ayaa waxa uu ku faanay sida Sir Alex Ferguson uu u helay saacada Rolex oo dahab ah oo qiimaheeda uu yahay 30 kun ginni isagoo qeyb ka ahaa go’aaminta natiijada ciyaar Champions League ah oo u dhaxeysay Manchester United iyo Juventus.
Xeer ilaaliyaha maxkamada Brian O’Neill oo ka hadlayay dhageysiga dacwada ee shalay ayaa yiri: “Wuxuu Pagliara ku eedeeyay Sir Alex Ferguson inay isla go’aamiyeen natiijada kulan ay la ciyaarayeen Juventus oo uu Pagliara xiriir la lahaa, kulankaasoo ahaa Champions League, wuxuuna Paligara sheegay inuu ugu mahadceliyay Sir Alex saacad Rolex ah oo dahab ah oo qiimaheeda uu yahay 30 kun ginni.
“Pagliara waxa uu ku eedeeyay Alex Ferguson inuu kaliya la shaqeyn jiray wakiilada diyaarka u ah inay la qeybsadaan lacagta dalaalnimo ee heshiisyada suuqa kala iibsiga. Wuxuu sheegay inuu lacag siiyay Ferguson hadda ka hor”
Pagliara iyo wakiil kale oo lagu magacaabo Dax Price ayaa sidoo kale wajahaya eedeymo la xiriira laaluush ka dib baaris ay sameysay jariirada Ingariiska ee Daily Telegraph.
Sir Alex Ferguson ayaa ka fariistay ciyaaraha sannadkii 2013, laakiin waxa uu tababar u ahaa Manchester United sideed kulan oo ay ka horyimaadeen Juventus koobka Champions League intii u dhaxeysay 1996 iyo 2003, iyadoo kulamadaas Man United laga badiyay kaliya seddex kulan oo dhamaantood 1-0 ku dhamaaday.
11kii September 1996 waxaa looga badiyay 1-0 iyadoo Alen Boksik uu dhaliyay goolka kaliya ee ciyaarta daqiiqadii 34aad, 20kii November 1996 waxaa Man United mar kale looga badiyay 1-0 iyadoo Alessandro Del Piero uu rigoore dhaliyay.
10kii December 1997, Filippo Inzaghi ayaa dhaliyay goolka guusha waqtiga dhimashada ciyaarta iyadoo ay aheyd kulankii ugu danbeysay ee wareega group-yada, Juventus ayaana u baahneyd guusha. Labada kooxood ayaa ka soo baxay Group B natiijadaas darteed.
« “Waa inaad weydiisaan Javier Tebas sababta dib loogu dhigay kulanka El Clasico” – Guardiola
RASMI: Joel Matip oo heshiis cusub qalinka ugu duugay kooxdiisa Liverpool »